Cool Air Skin cooler Factory - China Cool Air Skin mpanamboatra, mpamatsy
-30C Cryo 6 Cold Air Skin Cooling rafitra Masinina fanamafisana ny hoditra
Fampidirana endrika ivelany: 1. Compressors nohafarana avy any Japon 2. Mpitsoka hafainganam-pandehan'ny rivotra 3. Rafitra fampihenana ny tabataba tsy miankina 4. -30 ° C fampangatsiahana hafanana ambany indrindra 5. fantsona rivotra mangatsiaka be 200g 6. Fitsipika hafainganam-pandeha tsy misy tohiny, bokotra fanitsiana mari-pana 7. Bokotra fanombohana fanalahidy tokana Fampidirana ny tobin'ny mpandraharaha 1. Fitsipika hafainganam-pandeha tsy misy dingana, bokotra fanitsiana mari-pana 2. Famantarana ny mari-pana （-4 ℃ ~ -30 ℃） 3. bokotra Strat-Stop
milina fanamafisam-peo amin'ny hoditra matevina
Ny cooler rivotra I-Cool Skin dia natao hampihenana ny fanaintainana sy ny ratra mafana mandritra ny fitsaboana laser sy dermatolojika. Izy io koa dia manome fanamaivanana an-tsoroka an-tselika vonjimaika mandritra ny tsindrona, fampiharana tatoazy, fanesorana tatoazy, RF, fanesorana volo laser ary maro hafa.
ny maripana ambany indrindra amin'ny -30 zimmer cryo6 fitaovana fanamainana hoditra
Rafitra fanamainana rivotra amin'ny hoditra estetika: Ankafizo ny fitsaboana laser milay kokoa Ny hafanan'ny rivotra mangatsiaka -30degree Hoditra mangatsiaka mankany amin'ny torimaso Ialao ny ratra mafana 3 mpanohana an-tsokosoko ho an'ny fandidiana mety hampihena ny fanaintainana ary hiantoka ny vokatra tsara kokoa mandritra ny fitsaboana laser sy RF efijery fanaraha-maso rafitra: efijery miloko marevaka 2.4 santimetatra Hery fanamafisana: 1500W Halavan'ny maripana: -4 ℃ ~ -30 ℃ (azo ovaina) Refrigerant: R404A Fan ...
Machine mangatsiaka hoditra mangatsiaka Cryo ho an'ny fitsaboana amin'ny laser
Rafitra fanamainana hoditra hoditra estetika Fampidirana: Icool Cold Air -Ny rafitra mangatsiaka amin'ny hoditra-Natao ho an'ny fomba fiasa aestetika ambonimbony. Milina fampangatsiahana rivotra Feature: Afaka miasa miaraka amin'ny milina fanesorana volo laser 808nm, masinina laser miisa co2, milina SHR, milina IPL ary milina laser Nd yag… Mety amin'ny milina rehetra raha mahatsapa fanaintainana ny marary ary mila mangatsiatsiaka. Manolora fitsaboana ahazoana aina, hoy i byebye amin'ny fanaintainana Fitaovana fanamafisana ny rivotra icool function 1. hoditra mangatsiaka alohan'ny fitsaboana laser ...
Ny fitaovana rivotra mangatsiaka avy amin'ny mpitondra an'izao tontolo izao The Zimmer Cryo 6 Chiller dia natao hampihenana ny fanaintainana sy ny ratra mafana mandritra ny fitsaboana laser sy dermatolojika. Izy io koa dia manome fanamaivanana an-tsoroka an-tselika vonjimaika mandritra ny tsindrona, fampiharana tatoazy, fanesorana tatoazy, RF, fanesorana volo laser ary maro hafa. Ny fitaovana dia afaka manampy amin'ny fampiharana isan-karazany ary tena ilaina amin'ny fomba fanao amin'ny tarehy. Tsy toy ny fomba fampangatsiahana hafa, toy ny contact cool, cryogen spray na ranomandry, ny ...
Masinina rivotra mangatsiaka Zimmer Cryo 6
Masinera Famaritana ny milina fanamafisana Icool dia rafitra mangatsiaka tsy mampino, izay tsy hanelingelina ny fivoahan'ny laser sy ny asany mihitsy. Ampiaraho amin'ny fitaovana laser, toy ny laser diode 808, IPL, RF ， Mba hanamaivanana ny fanaintainan'ny marary, ny lokony, ny fivontosany ary ny fihainoany. Teoria miasa Alohan'ny fampiasana azy, dia manana fanatoranana vonjimaika。 Fangatahana mahery vaika hatramin'ny -30 ℃。 Ny compresseur manana hery matanjaka 1500W nomen'i Danfoss dia manome antoka fa afaka miasa maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny rafitra. （Rehefa ...
Zimmer rivotra mangatsiaka ho an'ny milina hatsaran-tarehy milay
Fampidirana ny ICOOL ICOOL dia rafitra fihenan-drivotra voalohany izay novolavolaina ho an'ny Pre, post ary mandritra ny fitsaboana laser nefa tsy manelingelina ny famoahana ny laser. ICOOL dia namboarina mba hampihenana ny fanaintainana, ny lokony, ny fivontosana ary ny fahasimban'ny hafanana ateraky ny fitsaboana amin'ny laser, ny fitsaboana Mazava (IPL) ary ny fitsaboana Radio matetika (RF) Teori-miasa ICOOL. Ny fanesorana volo laser amin'ny laser diode, IPL, pulse lava Nd: yag laser na alesandrite laser. 2. Fahita matetika amin'ny radio matetika hoditra re ...
Masinina mangatsiaka rivotra mangatsiaka I
Co2 Laser Laser miato, Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Laser estetika Co2, Shr Ipl Opt, Masinina mpanentana hozatra Ems, fanesorana ny holatra,